Ngwaahịa ngwaahịa - China Ngwaahịa ndị na-emepụta na ndị na-ebubata ya
Njikọ Ngwunye Ikuku
Air sooks Couplings EU .dị
Air sooks Couplings Anyị Typedị
Ugboro abụọ kpọchie clamps
Ọdụdọ clamps oyiyi akwa
Achọkarị ịna Iron Pipe Fittings
American Standard Banded achọkarị ịna Iron Pipe Fittings
DIN Standard Beaded achọkarị ịna Iron Pipe Fittings
Das Mita gbanwere
Ọnụ Carbon Steel Pipe
Di na Nwunye Camlock
Explosin-proog Pipe ịlụ
Igwe anaghị agba nchara Pipe Fittings
Gas Mita suivel mmebi
Mita Suivel Offsets
Anyị na-eche ihe ndị ahịa na-eche, ịdị mkpa nke ịdị ngwa iji mee ihe maka ọdịmma nke ọnọdụ ndị ahịa nke ụkpụrụ, na-enye ohere maka ịdị mma ka mma, ụgwọ nrụpụta dị ala, ọnụ ahịa nwere ezi uche, merie ndị ahịa ọhụrụ na ndị ochie nkwado na nkwenye maka Ngwaahịa, Onye isi clamps, Dual Pipe Mwekota, Black Metal Pipe Fittings, Anyị na-anabata ndị ahịa, mkpakọrịta azụmahịa na ndị enyi si n'akụkụ niile nke ụwa ịkpọtụrụ anyị ma chọọ nkwado maka uru ọ bụla. Anyị idowe mma n'elu na zuo okè anyị ihe na mmezi. N'otu oge, anyị ịrụ ifịk ifịk ime nnyocha na ọganihu maka Products, The kacha mma na mbụ mma maka akụkụ ahụ mapụtara bụ a kasị mkpa ihe maka njem. Anyị nwere ike jidesie ike n'iweta akụkụ izizi na nke ezigbo mma ọbụlagodi obere uru akwụpụtara. Chineke ga-agọzi anyị ka anyị jiri obiọma na-azụ ahịa ruo mgbe ebighị ebi.
Site na 2012 ụlọ ọrụ anyị na-amalite ịwepụta akwa eletriki, na mbụ anyị na-emepụta ahụ ọkụ, gụnyere (LL, LR, LB, T) na igwe nwere ike ịkpụgharị, wee buo ihe ndị ọzọ. Ugbu a, anyị nwere ike ịmepụta Guat, bushing, EYS, Lt connector with lugs, lt connector without lugs, union, enlarger, nso ọnụ ara, igbapu breather, cover, aluminum lugs wdg Na mbido anyị na-eji oji aja ebu mepụta, mgbe ahụ anyị na-emeziwanye nzọụkwụ site na nzọụkwụ, ugbu a, anyị niile emezigharịrị ihe ọhụrụ ahụ na-acha odo odo, eriri igwe ahụ bụ igwe CNC. Elu anyị na-eme ugbu a bụ ọkụ eletrik, mana enwere ike iji mpi ọkụ kpoo ọkụ. Ọzọkwa maka ọhụrụ ihe anyị nwekwara ahụmahụ na-emeghe ebu, ma ọ bụrụ na i nwere mmasị gị kpọtụrụ anyị.
Nkọwa 1.Malleable ígwè anwụrụ clamps oyiyi akwa Ngwaahịa anyị na-arụpụtara dị ka chọrọ nke EN-GJMB-300-6 na ike ọdụdọ min 300 N / mm2 na elongation min 6%. Ọtụtụ mgbe ndị ezigbo ike ọdụdọ dị elu karịa 300, ọ nwere ike iru 330 na ogologo oge nwere ike iru 8% .Ọ pụtara na ihe anyị dị n'etiti EN-GJMB-300-6 na EN-GJMB-330-8. 2. ojiji: achọkarị ịna ígwè anwụrụ clamps oyiyi akwa jikọọ ígwè tubing, diff ...
Carbon ígwè nipples nwere kpọmkwem sized, mma n'ibu omume na tightness, na-eji ọtụtụ ebe na-ewu ụlọ ike, nhazi, na industriesgha ụlọ ọrụ Anyị na-enye a keukwu nso nke Carbon Steel ọnụ ara. Ma ọ na-e arụpụtara site oru otu iji elu ọkwa carbon ígwè & technologically tupu ígwè.
Ndị na-edozi ihe na-emepụta ihe na carbon steel nwere oke dị mma, akụrụngwa akụrụngwa na ike, ma jiri ya rụọ ọrụ na ike, nhazi, na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Anyị na-enye a sara mbara elu ugwu nke Carbon Steel ọnụ ara. Ma ọ na-e arụpụtara site oru otu iji elu ọkwa carbon ígwè & technologically tupu ígwè.
Ngwunye ngwa ngwa nke anyi meputara bu nke apuru na nkpu, nkpuru, na clamps wdg. N'ikwu okwu n'ozuzu, akụkụ niile ziri ezi, n'ihi na ọ dị ezigbo mkpa ịgbakọta. Maka oghere niile tupu ebufee anyị niile, anyị na-anwale ule ikuku ikuku 100%. Elu na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ ma na-agba oji, anyị na-ebupụkwa ngwaahịa dị njọ.
N'ala nkwonkwo zuru ezu sooks sooks dabara adaba ka nke plated ígwè na-ejikọ a elu-nsogbu ikuku na uzuoku sooks ka a nwoke NPT threaded njikọ. Ọ nwere ngwụcha ngwụcha iji mepụta akara siri ike na sooks mgbe ejiri ya ma ọ bụ eriri aka ma ọ bụ ihe mgbochi (anaghị etinye ya) na nwanyị National Pipe Taper (NPT) na nke ọzọ iji jikọọ nwoke njikọ NPT. Nke a kwesịrị ekwesị ka nke plated ígwè maka ike, malleability, ductility, na iguzogide corrosion, na o nwere a polima oche maka chemical eguzogide. A na-atụ aro ka a rụọ ọrụ nkwonkwo a zuru oke maka ọrụ ụgbọ mmiri ruo ogo 450.
Malleable oyiyi akwa gụnyere elbows, tees, njikọ na gburugburu Flange wdg Ft flange bụ nnọọ ewu ewu na arịlịka ihe n'ala. High nkenke akụrụngwa bụ mma nkwa. Anyị factory bụ ndị mbụ na-eji electric stovu maka oge ọgbụgba na electric owuwu ke annealing na galvanizing usoro, e wezụga anyị mma equipments, na-eji odo shells, na ngwongwo mepụtara ọhụrụ mgbatị akara n'agbanyeghị n'ime ma ọ bụ n'èzí bụ nnọọ ezigbo onye na-enwu. .
Ejikọtara ikuku na-ebufe, na-ejikọ ngwaọrụ ikuku na sistemụ ikuku, sistemụ mmiri na ụlọ ọrụ ahụ, na saịtị ndị a na-ewu, ọrụ ugbo na ịkọ nri.
Abụọ kpọchie Pipe mwekota, Igwe anaghị agba nchara sooks Ndenye Jikọọ, White clamps, Sooks Fittings Na Couplings, Aluminum Pipe Fittings, Air Line sooks njikọ, Nwoke Ikpo njikọ, Black Iron Nkedo, Reducer ọnụ araba igwe anaghị agba nchara, Galvanized Pipe Fittings,
Air sooks njikọ Europen Type, Njikọ Ikuku, Ngwongwo Ngwongwo Nchara Na Ngwunye, Igwe anaghị agba nchara ọnụ, Igwe anaghị agba nchara Pipe ọnụ, Air sooks njikọ,
Okwu: Nanshijiazhuang Mba, Xizhaotong Town, Chang'an District, Shijiazhuang City, Hebei, China.
Regulator dọrọ aka ná ntị banyere ihe ize ndụ nke Suzi coi ...
Ejila njikere maka 2021 ...
Trending News: 2021 achọkarị ịna Nkedo Iron P ...
Los Angeles, USA: Akụkọ Hive na nso nso a ...
Achọkarị ịna ígwè anwụrụ oyiyi akwa
Anyị bụ ndị a ọkachamara emeputa nke M ...